महासय, 'मलाई मेरो शरीरसँग खेल्ने पुरुष चाहिएको होइन'! - शैली न्युज
महासय, ‘मलाई मेरो शरीरसँग खेल्ने पुरुष चाहिएको होइन’!
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ११:२३
सुजता लिम्बू । सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी रुपबाट एक अर्कासँगै जीवन व्यतित गर्ने सम्बन्ध हो विवाह ।
विवाहले दुई परिवारबीच प्रगाढ नयाँ नाता सम्बन्ध जोड्छ । विवाह कै कुरा गरीरहँदा, गत ०७६ फागुनमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्मले कभरेज गरेका थिए अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीबिचको बैवाहिक सम्बन्ध ! कयैनले उडाइरहेका थिए उनीहरुको सम्बन्धको मजाक । ट्रोल बनेका थिए फेसबुकमा ।
त्यो समय प्रियंका र आयुष्मानबीचको उमेर भिन्नतालाई लिएर शुभकामना दिनेको भन्दा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेको ओइरो लागेको थियो । कतिले उनीहरुबीचको उमेरका विषयलाई लिएर मजाक उडाएका थिए त, कतिले प्रियंकाको दोस्रो र आयुष्मानको पहिलो विवाह भनेर खिल्ली पनि उडाएका छन् । के प्रेममा पुरूषकै उमेर बढी हुनैपर्छ ? कम उमेरका पुरूषसँग महिलाले प्रेम गर्नै हुँदैन ?
अतीतलाई भुलेर वर्तमानसँग रमाउन खोज्नु गलत हो ? के डिभोर्सी महिलालाई खुशी हुने, नयाँ सम्बन्ध जोड्ने अधिकार छैन ? के हरेक सम्बन्ध टुट्नुका पछाडि नारी मात्रै दोषी हुन्छन् ?
मलाई एउटा कविताको हरफहरु याद आयो‘,
जब एउटी महिलाको श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, उनी समाजको घेराबन्दीमा पर्छिन् । कुनै परपुरुषसँग बोल्नु हुँदैन, समाजको खिसिटिउरीसँग आँशु निल्नुपर्छ । तर त्यो पुरुष भने नयाँ जीवन साथीको खोजीमा हुन्छ । कुनै प्रश्न सोधिन्छ । न उसको चासो राखिन्छ ।
जति नारी समानताको कुरा गरेपनि समाज परिवर्तन भएको छैन । समाज अझै पुरुषवादी छ । नायिका प्रियंकाको पहिलो श्रीमानले पनि दोस्रो विवाह गरिसकेका छन् । उनको त सायद कसैले ट्रोल पनि बनाएनन् होला ।
देखिएन पनि सामाजिक सञ्जालमा । तर प्रियंकालाई भने छाडिएन । एउटी नारीलाई डिभोर्स रहर हुँदैन, बाध्यता हुन्छ । जब सम्बन्धमा एक अर्काको सम्मान हुँदैन, एकले अर्कालाई रुचाइँदैन त्यहाँ अशान्तिले पारिवारिक धरोहर डगमगाउँछ । त्यहीँबाट क्रमशः सम्बन्धका ईँट्टा एकपछि अर्को गर्दै भत्किँदै जान्छ । नचाहँदा नचाहँदै भताभुङ्ग हुन्छ घर–गृहस्थी ।
जब मेरो यथार्थ प्रष्ट हुन्छ कि म एक विछेद्को दौरबाट गुज्रिएकी महिला हुँ । अनि प्रेम प्रस्ताव मैँले अस्विकार गर्नुभन्दा पहिले प्रस्ताव राख्ने आफैँ टाढा हुन्छन् म बाट । अनि सिलस्वभावको मुकुन्डो ओडेकाहरुले नधकाई भन्दिन्छन् ‘तिमिलाई बिवाह गरे भने त परिवार, समाजलाई के जवाफ दिनु ? अनि छिमेकमा आफ्ना, आफन्तमा कुरा काट्नेको पात्र बनिने रैछु ।
महासय, मलाई मेरो शरीरसँग खेल्ने पुरुष चाहिएको होइन । म यौनको प्यासी छैन । मात्र एक असल जीवनसाथी चाहन्छु । जो मेरो हरेक सुखमा मसँगै हाँसिदेओस् । दुःखमा मसँगै रोइदेओस् अथवा मलाई सहानुभूति देओस् ।
मलाई मेरा आत्मा, भावनालाई सम्मान गर्ने साथी भए पुग्छ । भीडमा छु तर एक्लै भएको महशुष हुन्छ । प्रश्न अनुत्तरित छन्, जवाफ मौन छ, साँच्चै संसार पापी अनि स्वार्थी रहेछ‘।
लिम्बू मकालु खबरमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।
मेटलाइफ फाउन्डेसन र प्लान इन्टरनेशनलद्वारा ४० हजारलाई राहत